Tafasaraka ity Fianakaviana Mpitsoa-ponenana Syriana ity Noho Ny Fanapahan-kevitr’i Trump · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2017 6:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, বাংলা, Ελληνικά, русский, English
Gasem al-Hamad sy ny zanany nalaina sary tao an-tranony ao Turlock, California. Nandositra ny ady an-trano tao Syria ny fianakaviana, saingy amin'izao fotoana izao, voaràra tsy mahazo miorim-ponenana ao California araka ny fikasany ny rahalahin'i Al-Hamad noho ny fampiatoan'ny filoha Donald Trump’ ny fandaharan'asa momba ny mpitsoa-ponenana Syriana Amerikana. Sary: Monica Campbell
Ity tantara nosoratan'i Monica Campbell ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 3 Febroary 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Tsy mila Syriana mpitsoa-ponenana intsony. Izany no voalazan'ny didim-panjakana momba ny fifindra-monina avy amin'ny Filoha Amerikana Donald Trump mba hanakanana, fara fahakeliny mandritra ny fotoana fohy, ity vondrona ity tsy hiditra ao Etazonia. Ora maro taorian'ny nivoahan'ny vaovao, niova ny fiainana, anisan'izany ny fiainan'ny fianakaviana mpitsoa-ponenana Syriana iray izay narahako hatramin'izy ireo nanorim-ponenana indray tao Turlock, California, adiny roa eo ho eo ao atsinanan'i San Francisco.
Efa ho herintaona izay no farany nahitako an'i Gasem al-Hamad, ny vadiny, Wajed al-Khlifa, sy ny zanak'izy ireo efatra. Ao Etazonia izy ireo 10 volana eo ho eo izay, rehefa namarana ny dia naharitra telo-taona hatramin'ny nandosiran'izy ireo ny tranony tao Homs, Syria.
Tsy ela taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro nahafatesana olona tao Paris sy ny fiakaran'ny fankahalana Silamo efa nampoizina. Ny voka-dratsy mampivarahontsana naterak'izany fanafihana izany dia ny fankahalana Silamo tafahoatra- ,nahatsapa izany tao Turlock i Hamad sy ny fianakaviany. Nahatsikaritra i Khlifa, izay manao hijab, hoy izy, fa lasa miherikerika any aminy ny olona. “Hatramin'ny nisian'ny fanafihana tao Paris … niova ny fandehan-javatra,” hoy izy.
Saingy nandroso ihany koa ny fianakaviana. Nankalaza ny Thanksgiving [Androm-Pisaorana] voalohany tao Etazonia izy ireo. Nahomby tamin'ny fanadinana hahazoana taratasy fahazoan-dalana hitondra fiara i Hamad ary afaka nitondra ireo zanany tamin'ny kamiao kely vaovao an'ny fianakaviana. Nahita fiarahamonina tao amin'ny moskea tao an-toerana izy ireo, noraisina ho iray amin'ny fianakaviana voalohany avy ao an-tanànan'i Syria nanorim-ponenana ao amin'ilay tanàna kely.
Te hiantso sy handre aho hoe manao ahoana ny fianakaviana nanomboka tamin'ny fanapahan-kevitr'i Trump hanakana vonjimaika ireo mpitsoa-ponenana Syriana.
Tamin'ny voalohany, toa nisosa tsara ny zava-drehetra. Nilaza tamiko i Hamad, miaraka amin'ny mpandikateny amin'ny antso an-tariby fa mandeha tsara ny any an-tsekolin’ ireo zanany ary vao avy nahazo taratasy fahazoan-dalana hitondra fiara ihany koa ny vadiny. Miasa ho mpivaro-kena halal ihany koa i Hamad. Asa sarotra izany, saingy mampiasa ny fahaizana norantoviny tao Syria izy.
Nivadika tamin'ny zava-mitranga ankehitriny ny resaka avy eo. “Tokony ho avy eto amin'ny 18 Febroary ny rahalahiko”, hoy i Hamad. “Saingy noho ny fanapahan-kevitry ny filoha Trump, nampiandrasana ny famandrihan-toerana rehetra. Tena manahy tanteraka momba ny rahalahiko aho.
Nandositra an'i Syria ihany koa ny rahalahin'i Hamad ary nanana tapakila fiaramanidina mankany California. Voalamina avokoa ny rehetra; Saingy nahatonga ny rahalahin'i Hamad tafahitsoka ao Jordania, nandehanany taorian'i Syria ny baikon'i Trump.
Na izany aza, nahavita niantsona tao California efa tamin'ny fotoana farany ny zanakalahin'ny rahalahiny 24 taona sy ny vadin'ny zanany lahy. “Tapa-bolana izay no nahatongavan'izy ireo talohan'ny namoahan'ny filoha Trump ny fanapahan-kevitra”, hoy i Hamad milaza momba ny zana-drahalahiny.
Koa ankehitriny, misaratsaraka ny fianakaviana, ary fantatr'i Hamad fa tsy afaka hiverina any Syria ny rahalahiny.
Mamelotena i Hamad sy ny fianakaviany izay vao avy tafavoaka tao Syria. Fotoana fohy taorian'ny nandosiran’ izy ireo, voadaroka baomba ny tranon'izy ireo. Nandefa sary misy ny korontantrano rava ny mpiray vodi-rindrina amin'izy ireo. “Jereo! Ity ny tranonareo! » hoy ry zareo.
Tao anatin'izany ihany, tsy mahagaga an’ i Hamad raha tafahitsoka ny rahalahiny ankehitirny. Nahatsapa fiovana izy hatramin'ny naha-voafidy an'i Trump tamin'ny fifidianana. Mety hoe ao California i Turlock, saingy ambanivohitra, mpandala ny nentin-drazana kokoa. Nahazo vato maro i Trump tao.
“Eny, nisy ny fiovana vitsivitsy”, hoy i Hamad. «Taloha, nahatsapa izahay fa anisan'ny fiarahamonina. Taty aoriana, niova ny fahatsapana. Mahatsiaro ho vahiny izahay eto. “
Gasem Al Hamad sy ny zananilahy, Mohamad, ao an-tranony ao Turlock, California. Nandositra an'i Syria ny fianakaviana Al Hamad, taorian'ny dia naharitra telo taona, tonga tao Etazonia ho mpitsoa-ponenana izy ireo. Sary: Monica Campbell
Maniry i Hamad mba ho betsaka kokoa ny olona mahatakatra ny fahasarotan'ny fahafaha-miditra ao Etazonia. Henjana ny fanadihadiana natao azy, izay nolazainy fa nandalovan'ny rahalahiny ihany koa. Fanadihadiana lava be, tsy misy fitsaharany. Natao scan hanaovana tahiry biometrika ny holatrolamasony. Niaritra telo taona i Hamad sy ny fianakaviany vao tafiditra ny tanin'i California rehefa avy nandositra an'i Syria.
Kanefa, fantatr'i Hamad fa misy olona sasany, tahaka an'i Trump, milaza fa mety mampidi-doza ny mpitsoa-ponenana, na mahazo fanampiana izy ireo kanefa mitolona mafy ny hafa avy ao Etazonia. Nangataka fanazavana bebe kokoa momba izany taminy aho.
«Mila olona i Amerika», hoy i Hamad. «Mila olona miasa.”
Ary nilaza izy fa hamaly fitia. «Ohatra, tonga eto aho, miasa aho, mandoa hetra aho, nividy fiara aho. Nanampy ity firenena ity aho», hoy izy.
Nangataka taminy ny fomba nanazavany izany rehetra izany tamin-janany aho, indrindra ny zanany vavimatoa, Arwa, 10 taona. Nilaza izy fa tsy fantany izay lazainy, saingy fantany fa avy any an-tsekoly ny nahazoana ilay vaovao.
Hita ihany koa fa mampianatra ny ray aman-dreniny mikasika an'i Etazonia i Arwa. “Tapa-bolana lasa izay, nisy ny Andron'i Martin Luther King “, hoy i Hamad. “Nanatona ahy ny zanakovavy ary nilaza tamiko androany fa misy fankalazana lehibe. Tsy fantatro akory ny momba izany.
Ny tantaran'i Etazonia. Ny Zo sivily. Nilaza i Hamad fa mahafinaritra azy ny mahita ny zanany vavy mianatra ny demaokrasia Amerikana, saingy miahiahy momba ny firenena ihany koa izy ankehitriny. «Manana ahiahy lehibe, goavana aho», hoy izy. «Manimba ny firenena ny fanavakavaham-bolo-koditra. Manahy be loatra ny amin'i Amerika aho. Raha sanatria misy ady an-trano ao Amerika, hanimba ny firenena izany. Jereo ny mitranga ao Syria. Rava i Syria. “
Ity tahotra lazain'i Hamad ity dia miteraka fanavakavaham-bolo-koditra ary mahatonga ny fianakaviana tahaka ny azy handao ny firenena – maniry izy mba handositra izany zavatra izany.